zimjabulisile ezokuhlehla kwemidlalo yama-olympics u-wayde van niekerk - Ilanga News
Home Ezemidlalo zimjabulisile ezokuhlehla kwemidlalo yama-olympics u-wayde van niekerk
INGQWELE yomhlaba kwi-400m yaseNingizimu Afrika uWayde van Niekerk (osesithombeni) isijabulele isinqumo sokuhlehliswa kwama-Olympic Games anonyaka asezokuba ngonyaka ozayo ngenxa yokuhlasela kobhubhane i-coronavirus.
Le midlalo izobanjelwa eJapan okuyizwe elingaqhelile kakhulu kwiChina lapho i-coronavirus iqale khona. UWayde ube sematheni kuma-Olympic Games ka-2016 eBrazil lapho ebeke irekhodi lomhlaba.
Lo msubathi ubeka irekhodi lo mhlaba nje, ubesuka ku-lane 8 okuyindawo okunzima ukunqoba uma ukuyona ingasakhulunywa eyokwenza irekhodi elisha lo mhlaba. UWayde uhlale iminyaka emibili engagijimi kulandela ukulimala edlala umdlalo wobungani webhola lo mbhoxo ngo-2017 eKapa.
Kusukela lapho uWayde akaphindanga wagijima lokho okuholele ekutheni angakwazi ukuvikela isi-coco sakhe se-400m kwi-International Association of Athletics Federation (IAAF) World Cha-mpionships nyakenye eDoha.
Emidlalweni yaseDoha iNingi-zimu Afrika ibuye ilambatha.
UWayde ekhuluma nabe-newframe.com uthe ukuhlehliswa kwale midlalo kuzomnika isikhathi esanele sokuziqeqesha nokululama ngokugcwele.
Lo msubathi ungomunye waba nethalente eliyisimanga njengoba ekwazi ukugijima ibanga lika-100m, 200m, 300m no-400m. Kwa-manye alawa mabanga lo msubathi uqopha amarekhodi.
Ekuqaleni konyaka wenze kahle kakhulu enqoba i-400m kwiTrack & Field Championships eBloemfontein.
Phambilini uMengameli we-Athletics South Africa (ASA) u-Aleck Skhosana uthe unethemba lokuthi uWayde uzokwenza kahle kuma-Olympic Games alandelayo kwazise uzokube emi kuma-lane aphakathi nendawo. Irekhodi likaWayde le-400m ngu-43:03.
Ama-Olympics Games ahlehliswe ngeledlule kulandela ukuthola ingcindezi kwe-Intenational Olympic Committee (IOC) kwamanye amazwe amemezele ukuthi ngeke abathumele abadlali bawo kulo mqhudelwano. Ngemuva kwale ngcindezi abe-IOC bathathe isinqumo soku-hlehlisa le mi-dlalo ize iba-njwe ngonyaka ozayo. Nakhona kuzokuya ngokuthi sinjani isimo njengoba kusadlange i-coronavirus.
Yize uWayde ethi uyakujabulela ukuhlehliswa kwalo mqhudelwano kodwa kubukeka kuzokuba nzima ukuba aziqeqeshe ngendlela afisa ngayo njengoba kumiswe yonke into eNingizimu Afrika.
Imidlalo eminingi imisiwe kanti abasubathi abakutholi ukuziqeqesha nokuncintisana ukuzibona ukuthi bamiphi.
Abadlali baseNingizimu Afrika bazokwazi ngomhla ka-16 enyange-ni ezayo ukuthi bazokwazi yini ukuqhubeka nezimpilo zabo njengoba elakuleli likwi-lockdown. Uma isimo siqhubeka siba simbi ku-bhekwe ukuba zandiswe izi-nsuku zokuvalelwa kwabantu ezindlini njengoba kwenzeka kwamanye amazwe.
Ngaphandle kukaWayde, baningi abanye abasubathi asebephu-mele obala bathi bayakujabulela ukuhlehliswa kwale midlalo ngoba bazothola isikhathi esanele soku-ziqeqesha.
Previous articleuWhite uza nezinguquko kwi-bulls
Next articleuyazethemba ngokubuyela kwi-absa premiership umdlali we-swallows